Sigstr: Mepụta, Mepụta, ma Tụọ Mgbasa Ozi Mbinye Email Gị | Martech Zone
Email ọ bụla nke a na-ezipụ site na igbe mbata gị bụ ohere ịzụ ahịa. Mgbe anyị na-ezigara ndị na-edebanye aha anyị akwụkwọ ozi, anyị na-ezigakwa ozi ịntanetị 20,000 ọzọ na nkwukọrịta kwa ụbọchị n'etiti ndị ọrụ, ndị ahịa, atụmanya, na ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze. Na-arịọ onye ọ bụla ka ọ gbakwunye ọkọlọtọ iji kwalite akwụkwọ ọcha ma ọ bụ webinar na-abịanụ na-agabiga obere ihe ịga nke ọma. Imirikiti ndị mmadụ na-eleghara arịrịọ ahụ anya, ndị ọzọ na-emebi njikọ ahụ, ndị mmadụ nwere ike ịpị ọkpụkpọ oku anaghị enweta ya.
Ntinye aha Email
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi na ntinye aka email dị mkpa, lelee nyocha ikpo ọkụ a na-achọpụta Anya.
Nke a bụ ebe Sigstr abata! Sigstr na-enye njikwa etiti nke mkpọsa mbinye aka email gị ebe enwere ike imelite ndị ọrụ niile n'otu ntabi anya. Enwere ike ịme mkpọsa site na ibudata ihe oyiyi ma ọ bụ tinye ederede. Ndị ọrụ gị adịghị mkpa idezi otu akara koodu - ndị otu ahịa gị nwere ike ịgbanwe mkpọsa oge ọ bụla masịrị ha.
Sigstr ọbụna sụgharịrị ezigbo nsụgharị nke mkpọsa maka ekwentị mkpanaaka na desktọọpụ na nyocha maka ha abụọ. Ma n'ezie, Sigstr na-enye dị mfe nchịkọta iji gosipụta oge ole mgbasa ozi ahụ lere yana pịa site na mkpọsa ma ọ bụ onye ọrụ!
Sigstr na-ekwekwa ka e kee otu dị iche iche. Nke a bụ ihe magburu onwe ya ebe ọ bụ na ịnwere ike inwe otu maka otu ndị na-akwado gị ka e kenyere maka mkpọsa na-akwalite onyinye ngwaahịa ọhụrụ, ebe a na-ekenye ndị otu ụlọ ọrụ gị na mkpọsa Ọrụ Careers, ebe ndị otu ahịa gị na-akwalite akwụkwọ ọcha na nloghachi na Etinye ego nke azịza gị!
Nke a na - enye ndị ọrụ ohere ịgbakwunye otu dị iche iche wee tinye otu ọ bụla na mkpọsa akọwapụtara! Obi tọrọ m ezigbo ụtọ Sigstr na anyị debanyere aha ozugbo - ọ dịkwa mma iji ma jikwaa ndị ọrụ anyị.
Sigstr Email Mbinye aka Integrations
Deploying Sigstr dị mfe n'ofe ụlọ ọrụ ọ bụla ebe ọ bụ na ha nwere njikọta ugbu a na ndekọ ndekọ Ọrụ, Outlook, Exchange, Office 365, Google Suite, Gmail na Apple Mail.
Na-eme ihe - Eme gị ahịa mgbalị n'ime Act-On site appending a Sigstr mbinye aka na mkpọsa gị Act-On email nkwukọrịta.
Hubspot - Sigstr nwekwara njikọta na Hubspot ebe i nwere ike gakọrịta ọ bụla Hubspot Ndepụta Smart ma nye ya otu mkpọsa Sigstr ABM, lee usoro iheomume na Hubspot mgbe ha pịrị, akpaaka-kee Hubspot kọntaktị dabere na onye ha zitere email, ma tinye ntinye aka na ntinye aka na-arụ ọrụ Hubspot Arụ ọrụ!
Marketo - Dozie mbinye aka mbinye aka gị na Marketo Smart Nsuso na Ibe ọdịda. I nwekwara ike iwekota ntinye aka na ndebiri email Marketo.
Salesforce - Dozie mbinye aka mbinye aka gị na mkpọsa Salesforce na akụkọ. I nwekwara ike iwekota ntinye aka na ndebiri VisualForce.
Ahịa - Tinyekwara mbinye aka Sigstr na mkpọsa na nkwukọrịta ozi email Cadence gị
Mgbaghara - Dozie mbinye aka mbinye aka gị na mkpọsa Pardot na akụkọ. I nwekwara ike ichikota ntinye aka na ndebiri email Pardot.
Rịọ a Sigstr ngosi
Tags: Na-aga n'ihuomeentinye aha emailasiaemail mkpọsaemail mbinye akaedebanye aha emailanya nsusookpomokuokpokoronnabata aha hubspotahịae debanye aha aha ahịa marketomgbagharagbaghara aha emailsalesforce ntinye aka emailmbinye akaKpoo